वाम गठबन्धनको नगरस्तरीय घरदैलो शुभारम्भ - GBM
वाम गठबन्धनको नगरस्तरीय घरदैलो शुभारम्भ
२०७४ मंसिर ६ gautam buddha sandesh	0 Comments
भैरहवा, ६ मंसिर । संयुक्त वामगठबन्धनले मंगलबार भैरहवामा घरदैलोको शुभारम्भ गरेको छ । बुद्धचोकबाट शुरु भएको बृहत नगरस्तरिय घरदैलो कार्यक्रम नगरका नारायण पथ, बैंकरोड, गल्लामण्डी, मैत्रीपथ हुंदै पुन बुद्धचोकमा पुगेर समापन भएको थियो ।
सयौंको संख्यामा ¥याली सहित ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेका कार्यकर्ता गल्लामण्डीमा पुगेर वडा नं. ६ को प्रचार कार्यालय उद्घाटनमा सहभागी भएको निर्वाचन परिचालन समिति सि.न.पा.–६ का सह–संयोजक एवं माओवादी केन्द्र सिद्धार्थनगरका सचिवालय सदस्य राम दयाल गुप्ताले बताए ।
कार्यालय उद्घाटन गर्दै माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हकिकुल्ला खाँले वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन मतदातामा आग्रह गरे । प्रतिनिधिसभाको लागि समानुपातिक तर्फका उमेदवार समेत रहेका खाँले वाम गठबन्धनका उम्मेदवार जितको नजिक भएको र देश विकासमा वाम सरकार नै आवश्यक भएकाले अत्याधिक बहुमतले विजयी हुने पनि बताए ।
प्रचार कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार घनश्याम भुषालले जनताले लोभ लालच र प्रलोभनमा नपरी निर्धक्कका साथ सहि उम्मेदवार छान्न सबैमा आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा क्षेत्र नं.३ (१) प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार विश्वास बरालले इमान्दार कर्मठ र जनताको काम गर्ने उमेदवार रोज्न मतदातालाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायी नेता कृष्ण प्रसाद शर्माले वाम सरकारले गर्ने कार्ययोजनाका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
प्रचार कार्यालय उद्घाटन पछि घरदैलो ¥याली मैत्रीपथ पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । सभामा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार विश्वास बराल अनुपले अब बन्ने सरकार वाम सरकार निश्चित भएकाले तलदेखि माथि सम्म विकासका लहर ल्याउन सजिलो हुने बताए । उनले चुनावको समयमा गरिने विकास र प्रलोभनमा नपर्न पनि मतदातालाई आग्रह गरे ।
← कांग्रेसको बहुमत आउँछ : नेता खांण
सिमावर्ती बेलहियाबासीको अठोट, नाकाबन्दी विरुद्ध नझुक्ने बाम गठबन्धन सरकार →
लोकसेवा विज्ञापन विरुद्ध राजपाको प्रदर्शन
बुद्ध लिजेण्ट राइडर क्लबद्वारा दिप प्रज्जवलन
२०७५ भाद्र १६ २०७५ भाद्र १७ gautam buddha sandesh	0
पश्चिम रुकुममा जनार्दन शर्मा विजयी
२०७४ मंसिर २२ २०७४ मंसिर २३ gautam buddha sandesh	0